Allgedo.com » 2012 » June » 26
Home » Archive Daily June 26th, 2012 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta booqday Degmada Balcad ee Gobalka Shabeelada Dhexe (Sawiro) Jun 26, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) - Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Dr, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta booqday Degmada Balcad ee gobalka Sh/Dhexe oo saakay gelinkii hore Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku heynta Degmadaasi.
Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli, waxaa booqashadiisa Degmada Balcad ku wehlinayay qaar ka tirsan Golahiisa Wasiirada,... Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta ka qeybgalay Munaasabadii 26ka June ee lagu qabtay Xaruntii Taalada SYL (Sawiro) Jun 26, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) - Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo qaar ka tirsan Golahiisa Wasiiradda ayaa maanta ka qeybgalay Munaasabad loogu dabaal dagayey maaliintii Gobalada Waqooyi ee Soomaaliyeed ay xornimada qaateen.
Munaasabadda ayaa lagu qabtay Xaruntii Taalada SYL,Waxaana ka kasoo qeybgalay Wasiiro,Xildhibaano, Haween, Dhalinyaro, Fanaaniin, Kooxda Baanbeyda,... Dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo si rasmi ah usoo bandhigtay Dastuurka Dalka lagu dhaqi doono (Daawo Dastuurka oo saxiixan) Jun 26, 2012 Taariikh 26/06/12
Xafiiska Ra’sulwasaaraha DGK Soomaaliya waxaa sharaf u ah inuu idiin soo gudbiyo Dastuurkii ay saxiixeen dhammaan saxiixayaashu.
Waxaa la soo gaaray waqtigii Dastuurka loo soo bandhigi lahaa umadda Soomaaliyeed . Dawladdu waa dareensan tahay in dad weynuhu sugayay inay helaan nuqul ka mid ah Dastuurka. Dawladdu si weyn ayay u danaynaynsaa inay hesho ra’yiga dadweynaha ee ku aaddan... Shirkada Hodan Global oo $10.000 ugu Deeqday Dhismaha Airporka Caabudwaq (Daawo sawiro) Jun 26, 2012 Shirkada Xawaalada Hodan Global oo Noqotay Shirkadii ugu horeeysay ee ka qayb qaadata Dhismaha Airporka Magaalada Caabudwaaq, waxaana ay ku deeqeen $10.000 Toban kun oo Dollar.
Magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxaa bilihii ugu danbeeyayba ka socday dhisme garoon diyaaradeed oo caalami ah garoonkaasoo noqonaya markii uu soo idlaado garoon wada anfaca soomaali oo idil.
Waxaana... Gudiga Farsamada ee ay Saxiixeyaasha Roadmapka ku dhiseen Nairobi oo noqonaya gudigii ugu awooda badna ee la dhiso mudo12 sano ah iyo wajibaadka gudigaasi (warbixin) Jun 26, 2012 Gudiga logu magacabay Gudiga Farsamada ee ka dhashay qodobadi ka soo baxay Shirki Roadmapka ee ka dhacay Nairobi ayaa waxaa uu noqonaya Gudiga Ugu awooda badan gudiyadi la dhisi jiray inti lagu jiray Dowladihi is xigxigay ee KMG ka ahaa.
Gudigaan oo ay shalay ansixiyeen Golaha Wasiirada Dowlada kmg ah ee Somalia oo uu hogaaminayay R/wasaare Cabdiweli Cali Gaas aya wajibaadkisa waxaa... Wafdi uu hogaaminayo duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib socdaal shaqo oo ay ku tageen dalka Jarmalka (Sawiro) Jun 26, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Wafdiga uu hogaaminayay mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa booqasho ku tagay magaalooyinka dalka Jarmalka kadib markii uu casuumaad ka helay Jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan.
Booqashada duqa Muqdisho uu ku gaaray cariga dalka Jaramlka ayaa waxa uu kulamo kala gadisan la qaatay Jaaliyadda... Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maanta booqday Degmada Balcad ee Gobalka Sh/ Dhexe. (WAR-SAXAAFADEED) Jun 26, 2012 Muqdisho, June, 26, 2012 ———- Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Dr, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta booqday Degmada Balcad ee gobalka Sh/Dhexe oo saakay gelinkii hore Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen gacan ku heynta Degmadaasi.
Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli, waxaa booqashadiisa Degmada Balcad ku wehlinayay qaar ka tirsan... Wafdi ka socday dowladda TFG, UN, AU, IGAD oo maanta Baydhabo gaaray. Jun 26, 2012 Magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Bay waxaa maanta gaaray wafdi ka socday dowladda TFG, IGAD, UN, iyo AU, waxaana halkaa ay kulamo kula qaateen maamulka gobalka Bay, iyo saraakiisha ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan.
Wafdigaan ayaa halkaasi qaab lama filaan ah ku tagay waxaana wararka ay sheegayaan in markii ay tageen si aad ahi loogu soo dhaweeyay magaaladaasi oo ka mid ah meelaha laga saaray... Dagaal culus oo xalay ka dhacay degmada Badhaadhe ee gobalka J/hoose. Jun 26, 2012 Dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda TFG oo garab ka helaaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab oo dhan ah ayaa xalay ka dhacay degmada Badhaadhe ee gobalka J/hoose.
Dagaalka oo aad u cuslaa waxa uu ku bilawday kadib markii ciidamo kamid ah Xarakada Al-shabaab ay weerar ku qaadeeen fariisin degmadaasi ay ku lahaayeen ciidamadaan.
Qasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa wararka hordhaca ah ku helnay 5... Munaasabada 26-Juun oo xalay laga kala xusay meelo badan oo dalka ka mid ah iyo Mas’uuliyiin Hambalyo u jeediyay shacabka Soomaaliyeed. Jun 26, 2012 26-Juun 1960 Shacabka Soomaaliyeed waxay u ahayd maalin qiimo weyn ugu fadhida, waxayna u ahayd maalin uga bedalan maalmaha kale iyadoona maalintaasi si aad ah loo maamuuso.
Maanta waxay ku beegantahay 26-Juun 2012, waxaana 52-sano kasoo wareegatay xilligii gobalada Waqooyi ee Soomaaliya ay xurnimada ka qaateen gumeestihii Ingiriiska oo xilligaa maamulaayay gobalada Waqooyi.
In xurnimo la helo waxaa... BoggaXiga »